HD GUARD New Version လိုချင်လို.ပါ - MYSTERY ZILLION
HD GUARD New Version လိုချင်လို.ပါ
bluelion2008 December 2010 edited April 2011 in Help Desk ကျွန်တော်.မှာအရင်က window xp sp2 အတွက် hdgaurd4သုံးခဲ.ပါတယ်။ အခု window7အတွက်ကျတော. အဆင်မပြေတော.ဘူး။ install လုပ်လို.မရတော.ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ window7အတွက် new version ဖြစ်ဖြစ် install လုပ်နည်းလေး ဖြစ်ဖြစ် ကူညီကြပါအုံးဗျာ။ virus ရန် ၊ ကလိတဲ.ဒဏ်မခံနိူင်တော.လို.ပါနော်။ကျေးဇူးအထူးတင်မှာပါဗျာ............................... မှတ်ချက်များ
Vassilihunt December 2010 edited December 2010 Registered Users download link:HD Gaurd V8.1original site: http://www.hdguard.com/
size : 22.8Mb bluelion2008 December 2010 edited December 2010 Registered Users Dowload ဆွဲသွားပါပီ၊ စမ်းလိုက်ပါအုံးမယ် ok ရင်ပြန်မျှပေးပါမယ်။ bluelion2008 December 2010 edited December 2010 Registered Users HDGUARD 8 ကမရဘူးဗျာ၊ ၃၀ ရက်ဘဲရတော. password ပေးလို.မရဘူးဇြစ်နေတယ်၊ full လေး ဖြစ်ဖြစ်crack or keygen လေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ.၊လုပ်ကြပါအုံးဗျာ naylin4u December 2010 edited December 2010 Registered Users အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ.......HDGUARD.v8.1.0.1.rarhttp://www.mediafire.com/?b7tf54c79di exit April 2011 edited April 2011 Registered Users အစ်ကို ရေ hdguard.8.1.0.1-mpt.exe အဲကောင်က run လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် အစ်ကို သားသားကိုကူပါအုံး Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla